ဥရောပသားတွေ အသုံးများတဲ့ Twitter မှာ follower အများဆုံး Kpop နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ Account များ | News Bar Myanmar
ဥရောပသားတွေ အသုံးများတဲ့ Twitter မှာ follower အများဆုံး Kpop နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ Account များ
Kpop idol တွေဟာ ပရိတ်သတ်တွေနဲ့ ထိတွေ့ဆက်သွယ်ဖို့အတွက် လူမှုကွန်ယက်ကိုလဲ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်အသုံးပြုကြပါတယ်။ အဲ့ဒီထဲမှာ twitter ကိုလဲ အများစုအသုံးပြုကြပြီး twitter မှာ follower အများဆုံး kpop နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ account တွေကတော့…
10. YG Family
YG Entertainment ရဲ့ တရားဝင် twitter ဖြစ်ပြီးတော့ Entertainment ရဲ့လက်အောက်က အနုပညာရှင်တွေရဲ့ အနုပညာလှုပိရှားမှုတွေ တရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်မှုတွေကို တင်လေ့ရှိပြီး follower ကတော့6million ရှိပါတယ်။
9. GOT7’s Bam Bam
GOT7 အဖွဲ့ဝင် Bam Bam ကိုယ်တိုင်သုံးပြီး သူ့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝအကြောင်းကို မျက်ခြေမပြတ်အောင် တင်ပေးလေ့ရှိတဲ့အပြင် fan တွေနဲ့လဲ အပြန်အလှန် tweet ပါတယ်။ Follower အနေနဲ့ကတော့6million ရှိပါတယ်။
8. Super Junior’s Swion
Choi Siwon ကိုယ်တိုင်သုံးပြီး သူ့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝအပြင် UNICEF ရဲ့သံတမန်အနေနဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေကိုပါ တင်ပေးနေတာမို့ ပရိတ်သတ်တွေအစဉ်တစိုက် စောင့်ကြည့်နေရပြီး follower 7.1 million တောင် ရှိပါတယ်။
GOT7 အဖွဲ့ကိုယ်တိုင်မသုံးပေမယ့် သူတို့ရဲ့အေဂျင်စီ JYP ကနေ သူတို့ရဲ့အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေ အကြောင်းကြော်ငြာပြီး ပရိတ်သတ်တွေကို အသိပေးဖို့ သုံးပါတယ်။ follower က 8.1 million ပါ။
6. SM Town
SM Entertainment ကနေသူတို့ရဲ့ အနုပညာရှင်တွေဖြစ်တဲ့ SNSD, Super Junior, Shinee, EXO, NCT, Red Velvet အစရှိသူတွေရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေကို စဉ်ဆက်မပြတ်တင်ပေးနေတာမို့ follower အနေနဲ့ 8.1 million ရှိပါတယ်။
သူတို့ရဲ့အေဂျင်စီဖြစ်တဲ့ SM Entertainment က ကိုင်တွယ်နေကာ EXO အဖွဲ့ရဲ့ အဖွဲ့လိုက် တစ်ဦးချင်းစီ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေကို တင်ပြပေးနေတဲ့ official twitter အကောင်​့ ဖြစ်ပြီးfollower 8.1 million ရှိပါတယ်။
ဖက်ရှင်နဲ့ဂီတမှာ ကိုရီးယားတစ်နိုင်ငံတည်းသာမဟုတ် တစ်ကမ္ဘာလုံးကို လွှမ်းမိုးထားတဲ့ G-Dragon ရဲ့ twitter acount ကိုတော့ သူ့ရဲ့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက ပရိတ်သတ်တွေက follow ထားပြီး follower 8.7 million ရှိပါတယ်။
BTS, TXT လိုမျိုးနာမည်ကျော်အဖွဲ့တွေရဲ့ အေဂျင်စီဖြစ်တဲ့ BigHit ကတော့ follower 14.5 million နဲ့ နံပါတ် ၃ နေရာမှာ ရပ်တည်နေပါတယ်။ Entertainment က အနုပညာရှင်တွေအကြောင်း တင်လေ့ရှိပါတယ်။
2. BTS official
BTS အဖွဲ့ရဲ့ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ အောင်မြင်မှုတွေ မှတ်တမ်းသစ်ရေးထိုးနိုင်မှုတွေကို မှတ်တမ်းတင်တဲ့ twitter account ပါ။ သူတို့ကိုယ်တိုင်တော့ မသုံးပဲ အေဂျင်စီကတာဝန်ရှိသူတွေ ကိုင်တွယ်ပြီး follower ကတော့ 21 million ရှိပါတယ်။
방탄소년단 @BTS_twt ဆိုတာကတော့ BTS အဖွဲ့ဝင်အားလုံး fan တွေနဲ့ အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ပြီး သူတို့ရဲ့ပုံတွေကို ကိုယ်တိုင်တင်တဲ့အကောင့်ပါ။ follower အနေနဲ့ 26.3 million ရှိပြီး kpop နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ account တွေထဲမှာ follower အများဆုံးပါ။
Next Kpop idol တွေ သရုပ်ဆောင်အဖြစ် ရပ်တည်လာရတဲ့ အကြောင်းအရင်း (၃) ချက် »
Previous « Debut လုပ်ခဲ့တာ7နှစ်ပြည့်သွားပီဖြစ်သည့် အောင်မြင်မှုတွေ ဝေဆာနေသော တောင်ကိုရီးယားရဲ့ BTS အဖွဲ့